Nlegharị anya nlegharị anya nke Malta dị mfe karịa maka ndị njem si USA
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Malta » Nlegharị anya nlegharị anya nke Malta dị mfe karịa maka ndị njem si USA
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ na -agbasa ozi Malta • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Njem nlegharị anya Malta na -eme ka njem dị mfe maka ndị njem si USA - hụrụ ebe a bụ Valletta
Na Fraịde, Julaị 23, 2021, ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya nke Malta bịanyere aka na nkwekọrịta na ebumnuche iji nye usoro enweghị nsogbu maka ndị njem si USA, na-aga Malta. Nzube nzuzo nke VeriFLY na-ahụ na echekwara data onye ọrụ yana ejiri ya maka ebumnuche na oge achọrọ iji gboo mkpa njem.
Ndị njem si US ruo Malta ga -enwe ohere inyocha ahụike ha wee nye akwụkwọ ọzọ.
Ngwa VeriFLY na-enyere aka ịgbasa ọgwụ mgbochi COVID-19, nkwado akwụkwọ yana gosipụta nsonaazụ n'ụzọ doro anya, nwee omume enyi.
VeriFLY nwere ihe karịrị nde mmadụ 1.5 na -arụsi ọrụ ike n'ụwa niile.
Ọzọkwa, ndị ọrụ VeriFLY ga -ejigide njikwa siri ike maka otu, mgbe, na onye a na -ekerịta ozi ha. Ugbu a nwere ihe karịrị nde mmadụ 1.5 na-arụsi ọrụ ike n'ụwa niile, VeriFLY bụ akpa akpa dijitalụ zuru ụwa ọnụ nke emebere iji nyere ndị njem na ndị bịaranụ aka ngwa ngwa n'enweghị nsogbu ọ bụla chọrọ ihe COVID-19 na-aga.
Ndị njem si US ruo Malta ga-enwe ohere inyocha ịdị mma ha wee nye akwụkwọ ndị ọzọ, dị ka ndị ikike Maltese chọrọ, site na ngwa VeriFLY nke na-enyere aka ịgbasa ọgwụ mgbochi COVID-19, nkwado akwụkwọ, na igosipụta nsonaazụ doro anya. , omume enyi na-agụ ihe.
Mgbe ha mepụtara profaịlụ echekwara na ekwentị mkpanaka ha, ndị njem ga -ebugo ozi ọgwụ mgbochi na akwụkwọ ndị ọzọ dịka achọrọ ozugbo na ngwa VeriFLY. Ngwa VeriFLY ga -enyocha na ozi onye njem ahụ dabara na ihe Malta setịpụrụ wee gosipụta ozi dị mfe ma ọ bụ daa. Mgbe nke a gasị, a ga -eduzi onye njem ahụ ka o dejupụta fọm onye na -ahụ maka njem maka ịbanye Malta.
Ngwa VeriFLY, dị na Google Play na Apple App Store, ga -enyere ndị ọrụ aka ịgbanye ngafe "Njem ha na Malta", nke na -agụnye ihe ndị a chọrọ. maka ịbanye Malta, ahaziri n'ime ndepụta nyocha enyi na enyi, ka emechara nzere niile achọrọ.
“Nkwekọrịta a na -egosi ikike Malta nwere imezi ngwa ngwa maka ihe ịma aka ọhụrụ metụtara njem. Ngwa VeriFLY ga -arụ ọrụ dị ka ihe dị mkpa iji nweta udo nke uche maka ndị America na ahụike ọha Maltese n'ozuzu ya. Anyị ga -aga n'ihu na -agbasi mbọ ike iji jide n'aka na mpaghara njem nlegharị anya mpaghara na -agbaso ụzọ ya maka mgbake n'ụzọ na -adigide ma na -arụ ọrụ nke ọma, "onye minista na -ahụ maka njem nlegharị anya na nchekwa ndị ahịa Clayton Bartolo kwuru.
“MTA nwere mpako ị nweta nkwekọrịta a na VeriFLY, nke ga-eme ka ọ dịrị ndị njem si USA mfe ịga Malta ugbu a, site n'inye ndị njem nlegharị anya ka ha nyefee akwụkwọ niile achọrọ tupu ọpụpụ ha. Nke a ga -apụta na ndị njem ga -eji udo nke uche pụọ n'ọdụ ụgbọ elu ha si malite, na -amara na akwụkwọ ha niile dị n'usoro, si otú a na -amalite ezumike ezumike ha site na mgbe ha banyere n'ụgbọ elu, "MTA CEO Johann Buttigieg kwuru, na -agbakwụnye na Nkwekọrịta a, ndị ọchịchị Malta na -akwado iji VeriFLY maka ịbanye na mba ahụ nke ọma.